Fanaankii caanka ahaa Cumar Shooli oo caawa ku geeriyooday Muqdisho - Jowhar Somali Leader
Home Somali Fanaankii caanka ahaa Cumar Shooli oo caawa ku geeriyooday Muqdisho
Fanaankii caanka ahaa Cumar Shooli oo caawa ku geeriyooday Muqdisho
Allaha u naxariistee waxaa caawa magaalada Muqdisho ku geeriyootay Allaha u naxariistee Cumar Cabdulle Shooli oo ka mid ahaa Fanaaniintii caanka aheyd ee Hobolada Waabaeri oo muddooyinkii u dambeeyay ku xanuunsanayay Muqdisho.
Cumar Shoole ayaa labo sano ka hor ka soo laabtay qurbaha, waxaana uu la noolaa carrurutiisa oo degan Muqdisho, hase ahaatee muddooyinkii u dambeeyay ayuu xanuunsanayay, isagoo galay koomo, laguna daweynayay mid ka mid ah Isbitaalada Muqdisho.
Madaalihii Hobolada Waaberi Cumar Shooli ayaa dhowaan ka soo muuqday mid ka mid ah telefishinada, isagoo ka hadlayay xaaladiisa, waxaa uu sheegay in aysan dowladda waxba u qaban, isagoo ahaa Fanaan qaran.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir ayaa soo saaray tacsi, isagoo afka dowladda ku hadlayay, waxaana uu sheegay inuu geeridiisa uga tacsiyadeynayo eheladiisa, hobolada waaberi iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed.
Allaha u naxariistee Cumar Shoole ayaa ahaa Fanaan si weyn looga yaqaanay, isagoo ku luqeeyay heeso kala duwan, waxaana uu ka mid ahaa tiirarkii Hobolada Qaranka Waaberi, waxaana u baxday naaneysta Madaalaha Hobolada Waaberi.